भारतमा आजबाट लक डाउन खुल्यो !! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Lockdown News/भारतमा आजबाट लक डाउन खुल्यो !!
भारतमा आजबाट लक डाउन खुल्यो !!
एजेन्सी, १९ जेठ । भारत`मा आज बाट लकडाउन खुलेको छ । भारत सरकारले अनलक नाम दिएर आज बाट लागु हुने गरी तीन चरणमा लकडाउन खुल्ने निर्णय लिएको हो । कोरो`ना भाइरससबाट डेढ लाखभन्दा बढी संक्रमित भइसकेपनि भारतले लकडाउन खोलेको हो ।
लकडा`उन खुलेपछि अन`लकको दोस्रो चरणमा स्कुल, कलेजलगायतका शैक्षिक संस्थाहरु खुल्नेछन् । शैक्षिक संस्थाको सवालमा राज्य सरकारहरु सँग परामर्श गरिने जनाइएको छ । कतिपय राज्यहरुमा १३ जुनबाट विद्यालय खुल्ने भनिएको छ । जुलाईमा भने सबै राज्यहरुमा विद्यालय खुल्ने निर्णय लिइने भएको छ । तीन महिनापछि विद्यार्थीहरु विद्यालय जानेछन् ।
तेस्रो चरणमा अन्तर्रा`ष्ट्रिय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल, सिनेमा हल, पौडी पोखरी, मनोरञ्जन पार्क, थिएटर, बार, एसेम्ब्ली हल खोल्न दिइनेछ । यसका लागि निश्चित नियम बनाइनेछ ।
भारतमा लक`डाउन खुलेको छ । नेपालमा ३२ जेठसम्म लकडाउन लम्ब्याइएको छ । भारतमा लकडाउन खुलेको अवस्थामा नेपालमा कस्तो निर्णय लिइएला भन्ने चासो बढेको छ । सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा खुकुलो बनाउँदै लाने नीति लिन लागेको छ
काठमाडौँ महा-नगरपालिका सिल: रेष्टुरेण्ट र बैंक सहित यस्ता कार्यहरु गर्न रोक !!